Kuongorora kweiyo iPhone 13 Pro Max: chii zvachinja | IPhone nhau
Luis Padilla | 27/09/2021 19:15 | iPhone 13, dzakawanda
Iyo iPhone 13 iri pano, uye kunyangwe zvichiratidzika kuti ese mamodheru akafanana zvakanyanya kune avo vakavatangira, zvakada kufanana, shanduko dzinounzwa nhare idzi nyowani dzakakosha uye isu tinokuudza nezvavo pano.
Iyo nyowani Apple smartphone iri pano, uye gore rino ndiyo inoshanduka inoitika mukati. Kunaka kunogona kutungamira kufunga kuti isu takatarisana neiyo imwechete smartphone, kunyangwe painewo madiki misiyano yatinofanira kufunga nezvayo, asi shanduko dzinonyanya mu "mukati". Usavhiringidzika nechitarisiko chekunze, nekuti nhau dzinokanganisa zvikamu zvakakosha zvakadai zvefoni senge skrini, bhatiri uye kamera, kunyanya kamera. Gore rino ongororo yedu yeiyo iPhone 13 Pro Max inotarisa pane izvi kugadzirisa kuitira kuti iwe uzive chaizvo izvo ino nyowani yekupedzisira inokupa iwe.
2 120Hz kuratidza
3 Bhatiri risingakundiki
4 Mifananidzo iri nani, kunyanya mune yakaderera mwenje
5 ProRes Vhidhiyo neCinema Mode
6 Shanduko yakakosha kwazvo
Apple yakachengeta yakafanana dhizaini yeiyo iPhone 12 yeiyo iPhone 13, kusvika pakuti vazhinji vanotaura nezve iPhone 12s. Kukurukurirana kusinganzwisisike parutivi, ichokwadi kuti iyo foni nyowani yakaoma kusiyanisa neziso rakashama kubva kune iro rakatangwa gore rapfuura, riine mitsara yakatwasuka, rakapetwa rakazara skrini uye module yekamera ine malenzi matatu akaiswa mune iwo hunhu hutatu kurongeka . Kune mutsva mutsva, Sierra Blue, uye matatu mavara ekare anochengetwa: goridhe, sirivheri uye graphite, iyo yekupedzisira ndiyo iyo yatinoratidza muchinyorwa chino.
Iyo bhatani dhizaini, mbeveve switch, uye mheni yekubatanidza pakati pemutauri nemakrofoni zvakafanana. Ukobvu hwechiteshi hwakawedzera zvishoma (0,02cm kupfuura iyo iPhone 12 Pro Max) uye huremu hwayo zvakare (magiramu gumi nemaviri akazara e12 gramu). Iko shanduko dzakakosha kana iwe uchinge uinacho. Kuramba kwemvura (IP68) zvakare kunoramba kushanduka.
Ehezve kwave nekuvandudzwa mu processor yainotakura, iyo nyowani A15 Bionic, ine simba uye inoshanda kupfuura iyo A14 Bionic yeiyo iPhone 12. Icho hachisi kuzove chinhu icho iwe chauri kuzoona kana, nekuti processor "yechinyakare" ichiri kushanda zviri nyore uye inopfuura zvakakwana zvekushandisa kana mitambo, kunyange inotoda zvakawanda. Iyo RAM, iyo Apple isingambotaure, inoramba isina kuchinjika neayo 6GB. Sarudzo dzekuchengetera dzinotangira pa128GB, zvakafanana negore rapfuura, asi gore rino tine modhi nyowani ye "Top" inosvika kusvika ku1TB yekugona, chimwe chinhu chichafadza vashoma nekuda kwemutengo wayo uye nekuti haina kunyatso kudikanwa vazhinji vevashandisi.
Apple yakaitumidza kuti Super Retina XDR Ratidza Pro Motion. Shure kwezita iri rinonzwika isu tine yakanakisa OLED skrini inochengeta saizi yakaenzana ye6,7 ", iine resolution imwechete asi iyo inosanganisira yekuvandudza yatakamirira kwenguva yakareba: zororo reti re120Hz. Izvi zvinoreva kuti iwo maficha uye shanduko dzinenge dzakatsetseka. Dambudziko rakatarisana neichi skrini nyowani nderekuti mifananidzo iri muIOS yatove yakanyorova, saka pakutanga pekutarisa vangangotadza kuona zvakawanda, asi zvinoratidza, kunyanya pakuvhura chishandiso nemifananidzo yese "kubhururuka" kudesktop yefoni yako.
Apple yaunza Pro Motion skrini (ndizvo zvaanodaidza kuti 120Hz) kuiyo iPhone, vamwe vanozofunga kuti yanga iri nguva, asi yakazviita nenzira yakapusa isingabate chete kuona kwaunoita skrini asi zvakare inosanganisira zvakanaka pamadhiramu. Chiyero chekuzorodza chechiratidziki ichi chinosiyana kubva pa10Hz kana pasisina chinodiwa (semuenzaniso kana uchiona static foto) kusvika pa120Hz pazvinenge zvichidikanwa (kana uchipeta pawebhu, mumifananidzo, nezvimwewo). Kana iyo iPhone yaigara iine 120Hz, pamusoro pekuti haina basa, kuzvitonga kweiyo terminal kwaizoderedzwa zvakanyanya, saka Apple yasarudza iyi tonga ine simba inosiyana zvichienderana nezvinodiwa zvenguva iyoyo, uye iri kubudirira.
Pakave zvakare nekuchinja kwakatarisirwa nevakawanda vedu: saizi ye notch yakaderedzwa. Kuti uite izvi, iyo yemusoro yakatamisirwa mudenga, kungo kumucheto kwechidzitiro, uye saizi yemeso ekuzivikanwa module yakaderedzwa. Musiyano wacho hauna kukura, asi unoonekwa, kunyange usingabatsiri (zvirinani izvozvi). Apple yaigona (inofanirwa) kunge yakasarudza kuwedzera chimwe chinhu mubato renzvimbo, asi chokwadi ndechekuti iwe unoramba uchiona kana iwo iwo maficha akafanana ebhatiri, WiFi, kufukidzwa kwenguva uye munzvimbo zhinji dzebasa. Hatigone kuwedzera huwandu hwebhatiri, semuenzaniso. Nzvimbo yakatambiswa iyo isu tichaona kana ramangwana rekugadzirisa rikagadziriswa.
Shanduko yekupedzisira pachiratidziri haina kuoneka. kupenya chaiko kwema 1000 nits, kana ichienzaniswa ne800 nits yemamwe mamodheru apfuura, ichichengetedza kupenya kwakanyanya kwema1200 nits kana uchiona zvemukati zveHDR. Ini handicherechedze shanduko pandinoona iyo skrini masikati machena mumugwagwa, ichiri kutaridzika zvakanaka, senge iri pane iyo iPhone 12 Pro Max.
Apple yakawana izvo zvaiita senge zvakaoma kuwana, kuti rakanakisa bhatiri reiyo iPhone 12 Pro Max yakagadziridzwa zvakanyanya neiyo yeiyo iPhone 13 Pro Max. Mazhinji emhosho sikirini, iine mwero wekuzorodza une simba wandakakuudza kare, processor nyowani yeA15 inokanganisa, inoshanda zvakanyanya segore rega rega, asi pasina kupokana chinhu chikuru chinosiyanisa ibhatiri rakakura. Iyo nyowani iPhone 13 Pro Max ine bhatiri inokwana 4.352mAh, ichienzaniswa ne3.687mAh yeiyo iPhone 12 Pro Max. Ese mamodheru egore rino anoona kuwedzera kwebhatiri, asi iyo yakawana kuwanda kwakanyanya ndiyo hombe yemhuri.
Kana iyo iPhone 12 Pro Max yaive muTop yekuzvimiririra, ichirova makwikwi matemu nemabhatiri mahombe, iyi iPhone 13 Pro Max ichaisa bhawa zvakanyanya. Ndakave neiyo iPhone nyowani mumaoko angu kwenguva pfupi, yakareba zvakakwana kuti uone izvozvo Ini ndinosvika pakupera kwezuva nebhatiri rakawandisa kupfuura pakutanga. Ini ndinofanirwa kuzviisa pamuedzo pamazuva iwayo anodikanwa umo iyo 12 Pro Max isina kusvika kumagumo ezuva nekuda kwekushandisa zvakanyanya, asi zvinoita sekunge iyi 13 Pro Max ichasimudza zvakakwana.
Mifananidzo iri nani, kunyanya mune yakaderera mwenje
Ndakati pakutanga, uko Apple yakaisa zvese zvange zviri mukamera. Iyi module hombe inodzivirira mabutiro egore rapfuura kubva kutishandira gore rino zvinopfuura kubhadhara kunetsekana uku. Apple yakagadziridza yega yega matatu emakamera lenzi, telephoto, yakafara-kona, uye yekupedzisira-yakafara kona. Maseru makuru, mapikisheni mahombe uye kuzarura kukuru mune maviri ekupedzisira, iine zoom inotangira kubva pa2,5x kuenda ku3x. Izvi zvinoshandura chii? Mairi isu tinowana mifananidzo iri nani, iyo inonyanya kuoneka mune yakaderera mwenje. Iyo kamera pane iyo iPhone 13 Pro Max yakavandudzika zvakanyanya mune yakaderera mwenje zvekuti kune dzimwe nguva iyo iyo husiku modhi inosvetuka pane iyo iPhone 12 Pro Max uye kwete pane iyo iPhone 13 Pro Max, nekuti iwe haudi iyo. Nenzira, ikozvino ese matatu malenzi anotendera husiku maitiro.
Apple inosanganisirawo chinhu chitsva chinonzi "Mifananidzo yemifananidzo". Wakaneta ne iPhone kutora "flat" mapikicha? Zvakanaka ikozvino unogona kushandura maitiro kamera yako yefoni, kuti itore zvidhori zvine musiyano wepamusoro, kupenya, kudziya kana kutonhora. Masitayera akatsanangurwa, asi iwe unogona kuzvishandura pane zvaunofarira, uye kana iwe ukaisa setaiti inoramba yakasarudzwa kusvika iwe wachinja zvakare. Aya profiles haakwanise kushandiswa kana iwe ukatora mafoto muRAW fomati. Uye pakupedzisira Macro modhi, iyo inochengeta iyo yakareba yakafara kona, iyo inokutendera iwe kutora mifananidzo yezvinhu zviri 2 masentimita kubva kamera. Icho chinhu chinoitika otomatiki paunosvika padhuze, uye kunyangwe pakutanga ndaifunga kuti zvaisazopa zvakawanda, chokwadi ndechekuti zvinokusiya iwe uchingoda kuziva mapikicha.
Pane chinhu chimwe chete chandisina kufarira nezve shanduko iyi mukamera: iyo yakawedzera telephoto zoom. Ndiyo lenzi inowanzo shandiswa mu portrait mode, uye Ini ndaifarira kuve ne2,5x zoom zvirinani pane iyo nyowani 3x nekuti ini ndinofanirwa kutenderera kure kuti ndiwane mamwe mafoto, uye dzimwe nguva hazvigoneke. Inenge iri nyaya yekujairira.
Mifananidzo app icon neMacro modhi
ProRes Vhidhiyo neCinema Mode
Iyo iPhone yagara iri yepamusoro kana zvasvika pakurekodha vhidhiyo. Shanduko dzese mukamera dzandataura dzemifananidzo dzinoratidzwa mukurekodha vhidhiyo, sezviri pachena, asi zvakare Apple yawedzera maviri matsva maficha, imwe inobata vashandisi vashoma, uye imwe ichazopa hongu , chokwadi. Chekutanga kurekodha ProRes, codec yakafanana ne "RAW" fomati mune izvo nyanzvi dzichakwanisa kugadzirisa vhidhiyo neruzivo rwese rwunosanganisira, asi izvo hazvifanire kukanganisa mushandisi wenguva dzose zvachose. Muchokwadi, izvo zvinokanganisa ndezvekuti 1 miniti ProRes 4K inogara 6GB yenzvimbo, saka kana usingaide, zvirinani uisiye yakaremara.
Iyo Cinematic Mode inonakidza kwazvo, uye iine gadziriro shoma uye kurovedzwa, inokupa iwe mhedzisiro. Iyo yakafanana nePortrait Mode asi muvhidhiyo, kunyangwe mashandiro ayo akasiyana. Paunoshandisa iyi modhi, kurekodha vhidhiyo kunogumira pa1080p 30fps, uye mukudzosera zvaunowana ndezvekuti vhidhiyo inoisa pfungwa pachinhu chikuru uye inokanganisa zvimwe zvese. IPhon inozviita zvoga, ichitarisa kumuoni, uye ichichinja zvichienderana nekuti zvinhu zvitsva zvinopinda mundege here. Iwe unogona zvakare kuzviita nemaoko uchinyora, kana gare gare nekugadzirisa vhidhiyo pane yako iPhone. Iine zvayakatadza, uye inofanirwa kunge ichivandudza, asi inofanira kucherechedzwa kuti inonakidza uye inopa mhedzisiro inoshamisa.
Shanduko yakakosha kwazvo
Iyo nyowani iPhone 13 Pro Max inomiririra shanduko yakakosha kwazvo ichienzaniswa nechizvarwa chakapfuura muzvinhu zvakakosha kune smartphone sebhatiri, skrini uye kamera. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa shanduko dzemazuva ese, iine itsva A15 Bionic processor inozorova mabhenji ese aripo uye ave. Zvinoita sekunge uri kutakura iyo imwechete iPhone muruoko rwako, asi chokwadi ndechekuti iyi iPhone 13 Pro Max yakasiyana zvakanyanya, kunyange vamwe vasingaoni. Kana iro riri dambudziko kwauri, iwe unofanirwa kumirira shanduko dhizaini gore rinouya, asi kana iwe uchida kuve ne iPhone iri nani kwazvo kupfuura yapfuura, shanduko yacho inokodzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kuongorora kweiyo iPhone 13 Pro Max: chii zvachinja mufoni nyowani yeApple
Kutora mifananidzo yakaita seiyi nemaPhones maviri padivi padivi iwe nekusaziva wakawana ZVAKANAKA stereoscopic 3D mifananidzo. Ndanga ndichitora mafoto angu ese mu3D kwemakore, uye imwe yedzenzira kushandisa makamera maviri, imwe ine imwecheteyo nhare kana kamera kutora mapikicha maviri masendimita mashoma kubva sekunge waisa imwe nhare padivi payo - zvinongoshanda chete kumatunhu asina kufamba, kana imwe nzira irikushandisa i3DMovieCam, inoshandisa malenzi maviri eiyo iPhone akaenzana (mune pro zvakajairwa uye zoom, mune gumi nemaviri uye 12 izvo zvisiri pro zvakajairika uye iyo yakafara yakafara kona, nezvimwewo.